FAMPIDINANA NY VIDIN-TSOLIKA : Hifampidinika amin’ireo mpandraharaha ny Filoha
Hatreto mbola mijanona amin’ny vidiny teo aloha ihany ny solika eto Madagasikara. 12 juin 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray dia hihaona mivantana amin’ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny solika ny Filoha Andry Rajoelina aorian’ny fahatongavany avy any Genève miatrika ilay fivoriambe iraisam-pirenena momba ny asa.
Mandritra io fihaonana io no hanohizana ny fifampiresahana eo amin’ireo mpandraharaha sy ny fanjakana mahakasika ny fampidinana ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Mandraka androany aloha dia mbola tsy misy ny tapaka teo amin’ny roa tonta, na izany aza anefa dia fanamby goavana apetraky ny Filoha Andry Rajoelina ho an’ny vahoaka Malagasy ny tsy maintsy hampidinana ny vidin-tsolika eto Madagasikara.
Tato anatin’ny roa taona nifanesy izay dia tsy mitsaha-miakatra ny vidin’ny solika. Nitarika hatrany amin’ny fampiakaran’ireo mpitatitra ny saran-dalana izany kanefa tsy nisy mazava ny fandraisan’andraikitry ny mpitondra teo aloha. Ankehitriny mametraka ny fitondram-panjakana tarihan’ny Filoha Andry Rajoelina fa laharam-pahamehana ho azy ny hamaha ny fahasahiranan’ny vahoaka Malagasy iray manontolo.
Nampanantena izy fa tsy maintsy midina ny vidin’ny solika ary azo atao tsara ny manatanteraka izany. Mandritra io fihaonana io araka izany no hiandrasana ny fanapahan-kevitra amin’ny fampidinana ny vidin-tsolika.